Madaxweynaha Jubbaland oo farriin u diray wakiilada beesha caalamka.
May 27, 2021 Xuseen 5
Madaxweynaha Jubaland Mudane Axmed Maxamed Islaam oo khudbad ka jeediyay gaba gabada shirka madasha wadatashiga qaran ayaa rajo Wanaagsan ka muujiyay in ay dalka ka dhacdo doorasho loo dhan yahay isla markana dhamaan dhinacyadu ay ka wada shaqeeyaan.
Axmed Madoobe ayaa tilmaamay ahmiyada ay leedahay in la fahmo marxaladahii kala duwanaa ee dalkeenu uu soo maray iyo halka aan maanta joogno taas oo tilmaam u ah rajada mustaqbalka dalkeena.
Waxaa Madaxweynahu uu uga mahad celiyay Ra”iisul Wasaaraha Xukuumada Federaalka ah dadaalka uu ku bixiyay sidii loo dajin lahaa xaalada dalka isagoo amaanay dulqaadka iyo dal jacaylka ay muujiyeen dadka ku nool Caasimada maalmahii adkaa ee lasoo maray, waxaa uu Madaxweynahu intaas ku daray in lagu kala aragti duwanaan karo Siyaasada balse hay’adaha amaanka iyo ciidamada looga baahan yahay taxadar dheeraad ah.
Waxaa kale oo Madaxweynahu uu ugu baaqay beesha Caalamka inay gacan ka haystaan sidii wakhtiga ugu dhow loogu qaban lahaa doorashada isla markana tageeradoodu ay lagama maarmaan tahay si looga dhabeeyo himilooyinka shacabka Soomaaliyeed ee mustaqbalka taas oo go’aamo iyo wadiiqooyin loo marayo la isku raacay intii uu socday shirka madasha wadatashiga qaran.
Ugu danbayn waxaa Madaxweynahu uu shacabka Soomaaliyeed ugu baaqay inay door muuqda ka qaatan howlaha socda isla markana ay ka shaqeeyaan sidii doorashadu ay ugu dhici lahayd wakhtiga ugu haboon si dalka looga saaro xaalada adag ee uu ku jiro.
waa warlord aan kismaayo ka bixi kariin waa local president waa madax weyne local ah waa kismaayo in xukumaa
@ Mahado Cali waalidkaa ayaa ama si qaldan kuu dhalay ama akhlaaqda kaa ilooway, afka qarmuun ee uraya iskasoo nadiifi. Ninka villa wardhiigley inan layaalka ku jooga ayaa ah kana lagu qasaaray ee maanta taladii dalka dubad jooga ka ah.
Waxaas warkiisa lo.a bahana
Waan ku naqaanaa in aad
Jaajus tahay beesha
Calamka muu kayaqaanaa
Dalka somali baa lah
Adiga somali ku taqaano
Waxa aad tahay in aad
Masarka somalia kahadasho
Mahayen dhibka aad marisay
Somalia jaajus nadhaaf
Besha calamka waa kuwii
dont ague with a fool you might not make the defference its only a fool cannot deffranciate between the wrong and the right it obvious that the person am talking is not any ather person but the fool who called himself ibrahim who wrote the above comment
Adan A a Ibrahim says:
am sorry mr ibrahim the person i was tergeting is mahad ali